အပင်တွေ ပိုးကျခြင်းရဲ့နောက်ကွယ် – Gazunmyo
သဘာဝဂေဟစနစ်ဆိုတာဟာ ရှုပ်ထွေးကျယ်ပြောတဲ့ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကိုယ့်လယ်ယာတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်မယ့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်လောက်ကိုသာ အလေးပေးဖြေရှင်းနေကြချိန် ဒီဂေဟစနစ်ကမ္ဘာမှာ ကိုယ်သတိမထားမိတဲ့ ပိုးမွှားတွေနဲ့သက်ရှိပေါင်းများစွာ ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုမေ့လျော့နေကြပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် စိုက်ခင်းတွေပိုးကိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လယ်သမားအများစုဟာ ပိုးသတ်ဆေး ပေါင်းသတ်ဆေး တို့ဖြန်းတာလောက်ပဲ အလွယ်လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမလုပ်ခင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပင်လေးတစ်ပင်လို့ တွေးကြည့်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အပင်တွေဆိုတာဟာလည်း ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလို သက်ရှိမျိုးစိတ်တွေပါပဲ။ လူတွေလိုပဲ သူတို့မှာ ကိုယ်တွင်း ခုခံနိုင်ရည်စွမ်းအား ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်။ လူတွေပင်ပန်းအားနည်းတဲ့အခါ ဘာလို့အလွယ်တကူဖျားနာကြလဲဆိုတော့ ကိုယ်ခံအားတွေ နည်းကုန်လို့ပါ။ အပင်လေးတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကျန်းမာနေတဲ့အပင်တွေကပဲ သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်ခံအားကြောင့် ပိုးမွှားတွေကို ပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးမွှားတွေကလည်း အားနည်းတဲ့အပင်တွေကိုပိုပြီး ချဉ်းကပ်ကြပါတယ်။
အပင်စိုက်မဲ့သူတစ်ယောက်က ကိုယ့်အပင်တွေကိုဘယ်နေရာမှာ စိုက်ပျိုးမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ် ခွင့်ရှိပါတယ်။ အပင်တွေဟာ မှန်ကန်တဲ့ နေရောင်ခြည်၊ ရေ၊ မြေဩဇာ ပမာဏ နဲ့ သူ့ရာသီနဲ့သူဖြစ်မှ ကောင်းကောင်းရှင်သန်နိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့ နံပါတ်တစ်တာဝန်က ကိုယ့်အပင်လေးတွေကို ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ကိုယ့်အပင်ဟာပိုးမွှားတွေရဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းခံနေရပြီဆိုရင်အောက်ကမေးခွန်းတွေနဲ့ တစ်ချက်လောက် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
1.အပင်ဟာ လိုအပ်တဲ့နေရောင်ခြည်ကောင်းစွာမရရှိလို့လား သို့မဟုတ် လိုတာထက်ပိုရနေတာလား?
2. စိုက်ပျိုးမြေကအရမ်း စိုစွတ်နေလား၊ ခြောက်သွေ့နေလား။ ရေရောကောင်းကောင်းမွန်မွန်စုပ်ယူနိုင်ရဲ့လား ? အစိုဓါတ်ကိုရောထိန်းသိမ်းနိုင်လား ?
3. စိုက်ပျိုးမြေဟာ လိုအပ်တဲ့ အော်ဂဲနစ် ဖြည့်စွက်မှုတွေနဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ မရလို့လား?
4 ကိုယ်စိုက်နေတဲ့ အပင်ရဲ့ရာသီချိန် မဟုတ်လို့လား?
5.အပင်ရဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုးစားခံရတဲ့ မကျန်းမာတဲ့ အပင်တွေရှိနေလို့လား?
ဒီမေးခွန်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာ သိလာမှာပါ။ ကိုယ့်လက်ရှိစိုက်ပျိုးမြေအနေအထား ဟာ ကိုယ်စိုက်ပျိုးနေတဲ့ သစ်သီးဝလံမျိူးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိချင်မှတောင်ရှိမယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကန်စွန်းမြို့ စိုက်ခင်းမှာတော့ အီတလီပင်စိမ် (Italian basil)၊ ရို့စ်မေရီ (rosemary)၊ စမုန် (thyme) တို့ကို ရန်ကုန်မှာဆို ခြောက်သွေ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလကနေ မေလထိပဲ စိုက်ပျိုးလို့ရတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ မိုးရာသီတွင်း စိုက်ပျိုးခဲ့တုန်းက ရာသီဥတုမကိုက်ညီမှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့အပင်လေးတွေ ပိုးကိုက် ၊ ရောဂါ ဖြစ်ပြီး နှစ်တိုင်းသေသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ကိုယ်စိုက်မယ့်အပင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဦးစွာသိဖို့ကြိုးစားရမှာပါ။ အပင်လေးတွေကို ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ဖန်တီးပေးမှ ပိုးမွှားအန္တရာယ်တွေ ရဲ့အနှောက်အယှက်ပေးမှုကိုလဲ သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်မှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုက်ခင်းလေးမှာ ငရုတ်သီးပင်လေးတွေလည်း စိုက်ဖြစ်ပြီးတော့သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ ငှက်လေးတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငရုတ်နီပင်လေးတွေကိုစားနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းစွာပဲ ကျွန်တော်တို့သုတေသနလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘာကိုတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ ငှက်လေးတွေဟာ ငရုတ်သီးရဲ့ပူစပ်ပူလောင် အရသာကို ခံစားထိတွေ့နိုင်မှုမရှိပါဘူး။ တချို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ ငှက်တွေမှာ အရသာခံဖုလေးတွေက မရှိသလောက် နည်းတာကြောင့် ငရုတ်သီးတွေထဲမှာပါတဲ့ ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်စေတဲ့ “ကပ်ပ်ဆိုက်ဆင်န်” ဆိုတဲ့ ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးကို အရသာခံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ ငှက်လေးတွေဟာ ငရုတ်သီးစားရတာကို နှစ်သက်တာမို့လို့သူတို့ဟာ ငရုတ်မျိုးစေ့တွေကို အဓိကဖြန့်ဖြူးပေးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ငရုတ်ပင်လေးတွေဟာ ဉာဏ်လည်းအတော်ကောင်းပုံပါပဲ။ သူတို့အစေ့ကို ဖြန့်ဖြူးပေးမဲ့ ငှက်တွေအတွက်ကြတော့ Read more…
ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲရယ် ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ စားသုံးသူတွေရ ဲ့ဝယ်လိုအားရယ်ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေက သူတို့ရဲ ့စိုက်ပျိုးကုန်တွေကို စုံလင်အောင် လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းတွေ ၊ လေပြင်းတွေ ၊ ပြင်းထန်တဲ့ အပူချိန်စတာတွေဟာ အပင်တွေကို ရောဂါအများအပြားဖြစ်စေပြီး အနာဂတ်မှာ ပိုးကျစေနိုင်ပါတယ်။ COVID-19 လိုမျိုး ကပ်ရောဂါဆိုးတွေကျရောက်တဲ့အချိန်ဟာ လူတွေကို အိမ်မှာ ပိုနေဖြစ်စေပြီးတော့ အချိန်တော်တော်ကြာကြာခံတဲ့ ပဲနီလေးနဲ့ကြက်သွန်စတာတွေကို ပိုပြီး စုဆောင်းဖြစ်စေပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးထဲစိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုထင်မှတ်မထားတဲ့ အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကြတော့ အခက်အခဲတွေပိုပြီးရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ Read more…
ကိုယ့် အပင်လေးတွေက ဘယ်လို မြေဆီလွှာကို နှစ်သက်သလဲ ?
အရသာ ထူးကဲတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်အပင်လေးတွေ ဘယ်လိုမြေဆီလွှာကို နှစ်သက်လဲဆိုတာ ကိုသိဖို့ ပဓာနအကျဆုံးပါပဲ။ မြေသားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံက ကိုယ့်အပင်လေးတွေရဲ့အမြစ်တွေကြီးထွားနိုင်စွမ်း၊ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေရမလဲဆိုတဲ့ အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အလုပ်ဖြစ်စေမဲ့ အကြံကောင်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်အပင်လေးတွေ ဘယ်လို ရာသီမှာ ကောင်းစွာ ရှင်သန်လေ့ရှိကြလဲဆိုတာကို သိနေဖို့ပါပဲ။ အပင်တိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့လိုအင် ၊ လိုအပ်ချက် ကိုယ်စီရှိကြတဲ့ အတွက် စိုက်ပျိုးမဲ့သူဟာ မှန်ကန်တဲ့အနေအထားကို ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ – စပါး (rice) Read more…